कथा : काेराेना कहर र अवसर - नेपालबहस
कथा : काेराेना कहर र अवसर
| १४:३६:१८ मा प्रकाशित
वुहानी कोरोना छँदै यसपालीको दशैं तिहार जसोतसो बिते । कोरोना कहरको कोशेलीले गाउँघर, चुलोचौको र पुरै समुदाय त्रसित थियो । आफन्त निम्त्याउने, आशिर्वाद लिनेदिने, मिठोमसिनो खाने, देउसीभैलोमा रमाउने अनि एकसरो नयाँ लुगा लगाउने कैयौं सपनाहरु खासै खुल्न सकेनन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाई रित्तो हात नेपाल भित्रिएकाहरु पुन मुग्लान पसे भने पैतलामा ठेला उठाई राजधानीबाट गाउँ फिरेकाहरु फेरि उत‌ै फिरे।
सन् २०१५ बाटै बहस र चर्चा छेडिएको कोरोनाको नाम र काम गुमनाम रहे पनि कालान्तरमा यो कोभिड-१९ भनेर चिनाईयो । यो के थियो भन्ने वैज्ञानिक तथा बौद्विक बहस र अध्ययनको पाटो होला । यसको उत्पत्ति र प्रसारबारे विश्वका आ-आफ्नै, सामुहिक तथा संस्थागत मान्यताहरु, राजनैतिक, रणनैतिक, व्यवसायिक वा सामरिक उद्देश्यहरु थिए, थिएनन् म अनभिज्ञ रहें । तर एक सामान्य नागरिकको बुझाइमा यो एक प्रकारको सामाजिक आतङ्क र विश्ववका लागि लोकप्रिय शब्द बन्यो । सायद अब नवशिशु बाहेक कोरोना नबुझ्ने कोही रहेनन् संसारभरमा ।
विश्वभरिबाट सामाजिक संजाल तथा विभिन्न मिडियाहरुमा कोरोनाबाट सिर्जित भयावह पीडा, रोदन, चिच्याहटहरु ओईरिरहेका थिए । उच्च पदस्थ नेता, डाक्टर, कलाकर्मीहरुको मृत्युको खबर, मानव निर्मित ठूला यन्त्रहरुद्वारा मृतकको दाहसंस्कार र मानव आकृति नै महशुस नहुने सेता पोशाकधारी मानिसहरुले गरेको उद्वार कार्यले मेरो जीर्ण मगज हल्लाई रहन्थे, जून अझै पनि ताजै छन्।
कोरोना आंधीका झण्डै चार महिना बितिसकेका थिए । म भने टसकोमस थिएन । मलाई लाग्थ्यो, यो मेरो भूमिमा पस्नै सक्दैन । लाग्थ्यो, मेरा कुलदेवता छन् । पशुपतिनाथ छन् । दुईतिहाईको जबरदस्त सरकार अनि प्रतिपक्षहरु छन् । के होला र ? तर सकेनन् कसैले । सरकार हल्लियो । पशुपतिनाथ चुप बसे । कुलदेवताले पनि सुंईकुच्चा ठोके । अनायासै चीनको वुहान लगायत विश्वभरिबाट उद्वारका लागि नेपाली चित्कार उर्लियो । अप्रत्याशित आईलागेको यो कहरले देशैलाई कक्रक्क पारी दियो ।
मैले जिन्दगीमा दोस्रो पटक सुने नयाँ शब्द “लकडाउन” । म‌ैले कुनै भेउ पाईन लकडाउन के हो ? कस्तो हुन्छ ? के गर्छ यस्ले ? अब मैले के गर्ने के नगर्ने र किन ? वि. संं. २०४७ ताका एसएलसी दिएपछि भागेर अल्मोडा पुग्दा ‘चक्काजाम’ भन्ने नयाँ शब्द सुनेर अचम्मित भाथें । उसबेला मैले “बाबुजी सब गाडीका चक्काजाम कैसे हुवा तो ? भन्दा सारा कुल्ली र ठेकेदार खित्का छोडेर हाँसे । मेरो काका लोकबहादुर थापाले रल्लिदै ” अरे बेटा आज हड्ताल छ । गाडीहरु चल्न पाउँदैनन् । त्यसैले चक्काजाम भनेको भनेर मेरो दबेको बोली र जिज्ञासा मेटाउनु भएको याद आयो । यसपाली भने कोही थेन काकासरी । सोधु त दारी फूलिसक्दा नि के सोध्नु । घमण्ड जाग्यो संस्कारको । नजान्दा नसोध्ने पौरखी संस्कारमा हुर्केको म ।
पंचायतकाल, कांग्रेसकाल, ज्ञानेन्द्रकाल, जनयुद्वकाल, संकटकाल र कम्निष्टकालसम्म मात्रै भोगेको मेरो खप्परले फेरि लकडाउनकाल भोग्नु पर्ने भो । यी डाम्ना कालहरु त मैले बुझेकै थिए । फेरि यो कस्तो बेथिति आईलाग्ने हो ? म हर रात मडारिई रहें । सोचमग्न भई रहें । मैले सबैतिर फोन गरें, जोजो मेराहरु बाहिरिएका थिए, भन्दिए लकडाउन हुँदैछ त, घर फर्क। उनीहरु सोध्थे के हुन्छ ? किन र ? म भन्थें मलाई था’छैन । सबै यसै भन्छन् । धेरै आईसके । बस् म चुप लाग्थें । भोलि फेरि यसै गर्थें । मलाइ थाहा थिएन , अब के हुने हो ?
घरका खामा एक्लै अनि खाटहरु खाली थिए। बालबच्चा सबै बाहिर थिए । मलाई घरिनाको रोईलो र कन्कन् सुन्ने त फूर्सद थेन भने के हेर्नु टीभी ? के सुन्नु रेडियो ? उता बा भने रेडियोका पारखी । चाईनिज रेडियो । सेल नचाईने । ज्याक जोड्यो त एकैनास बोली राख्ने । न घट्ने, न बढ्ने । बाले रेडियो घन्काउँदा ढोकाको चुकुल लाउनुहुन्थ्यो । आवाज बटारिंदै मेरो कोठा पुग्थ्यो । खान्की पस्केसी बालाई बोलाउन म दशौं डाको कुर्लेको छु छिमेकी जाग्ने गरि ।
उता बाको रेडियोले भने रेडियो टाईगरू भनेर ध्यांं आवाज निकालिरहन्थ्यो । म सोच्थे, जिन्दगीभरि त समाचार अघि गीतसंगीत सुन्थें । हैन् लकडाउनका खबर भन्दा अघि बाघ गर्जिन पर्छ होला ? ह‌ैन सन्देश भए त गाई, भैंसी, भेडाबाख्रा वा कुखुरा र अन्य पंछि थे ? आयआर्जनको सन्देश दिन्थें । मैले मेरा जानकार काकालाई सोधें, काका यो रेडियोमा किन बाघ गर्जिन्छ ? काका घोरिएर बोले खै के अलच्छिन लायो भदै । यो कराएदेखि बाघको बिगबिगी छ । न पशु बाँकी छन् न मान्छे । हैन, भदै यो हरियो बाघ हो क्या ? म अवाक भए । हरियो बाघ रे !!
घरिनाले भनिन्। “कोरोना भन्छन् टीभी हेरौंला । डिसमा पैसा हाल्नुस् ।” म पो के कम । बालकृष्ण सरले कम्प्यूटर किन्दा बखतको किनेको २१ ईन्चे टीभीमा लागेको जालो हटाए । पैसा हालें । साँझबाटै आवाजले घर भरियो । रिमुटका हराएका अक्षरहरु र लकडाउनको नभेटाएको अर्थले मलाई सताई रहे । छिनछिनमा च्यानल बदली रहें । सरकार रन्थनिरहेको थियो । प्रतिपक्षहरु गिन्गिनाई रहेका थिए । खरिपाटी रंगिदै थियो । पत्रकारहरु बेहोसी मै कराउँथे । सरकारका प्रवक्ता भने “यस्तो विपदको नेपालले पहिलो तयारी गर्नु परेको, हालसम्मका कुनै पनि सरकारले शुन्य व्यवस्था गरेकोले यो सरकार यस विषम अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिई दत्तचित्त भई जनताको हितमा लाग्दैछ। धैर्य गर्नुस” भन्दैथे ।
टीभी हेर्दै गर्थ्यौं । हरेक पल, हरेक क्षण बिरक्त अनुहार अनि असरल्ल लत्रिदैका थकित ज्यानहरु धादिङ्, मुग्लिन, पाल्पा, बुटवल, काभ्रे, पोखरा, डोटी दिपायलका अलकत्रे सडकहरुमा तितरबितर हिंडिरहेको देखिन्थे । कोही दिलदारहरु बाटामा चाउचाउ र पानी बांडेको देखिन्थ्यो । कुम्लाकुटिराहरु, फिता चुटेका चप्पलहरु , कतै कांधमा बोकिएका भोका शिशुहरुको भोक , निद्रा, घाम र थकानका कारुणिक चित्कार थिए ।
कामबाट निकालिनु, कोठाबाट निकालिनु र पसल अनि बस्तीबाट निकालिंदाका असामाजिक पीडाका दर्दनाक कथाहरुले रंगाउदै खाली खुट्टा वैशाखको अटल तातोमा घिस्रिदै देखिन्थे हजारौं फाटेका पैतलाहरु । यतिबेला सबैको प्यारो र सुरक्षित ठानिएको थियो गाउँघर । लाग्थ्यो, अब कुनै भयावह संकट आउँदै छ, घर पुगौं । उतै बाँचौंला या सँगै मरौंला जस्तो मनोविज्ञान थियो त्यो । कोही कसैलाई नछुने, कोही केही नदिने गरि भित्रिएको थियो त्यो नयाँ छुवाछूत संस्कार ।
छिनछिनमा टीभीले देखाउने दृष्यहरुले मनै विरक्त हुन्थ्यो । तिलको गेडी नअट्ने राजधानी लगायत संसारका लमतन्न काला सडकहरु मौन थिए । यतिखेर लाखौंलाई राहत दिने काठमाडौं पनि विरानो बनिदियो । संसारकै हवाईमार्ग, रेलमार्गहरु र सडक संजाल पुरै खाली बन्यो। कुकूर र अन्य छाडा पशुचौपायाहरु बाटोमा मानव त्याज्य वस्तुको खोजीमा भौंतारिरहेका देखिन्थे। विचरा तिनलाई के थाहा कोरोना के हो ? किन खचाखच सडक भरिने मानिसहरु र यातायातका साधनहरु विलोप भए ?
काठमाडौं माथिको कालो तुंवालो विरक्त भै आकाश खुलिसकेको थियो । हिमश्रृंखलाहरु अनि हरिया नागबेली पहाडहरु युवावस्थामा फर्किए जस्ता चहकिला थिए । सडक बालबालिकाहरु, सुस्तमनस्थितिका मानिसहरु र पशुपंक्षीहरु , जसको आश्रय सडक थियो, उ नै मौन बसिदिएको थियो । हिडडुल निषेध थियो, यद्दपि बालुवाटार, सिंहदरबार, लैनचौर, शितलनिवास र खुमलटारका दौडधुपका कसरतहरु मनग्ये थिए । कुनै रोकटोक थिएन ।
यत्तिकैमा विज्ञ नेपाली डाक्टरहरुको आलटाल र अन्यौल बीच विजय लामाको नेतृत्वमा नेपाली सेनासहितको उडान वुहानतिर उड्यो । फर्क्यो । खरिपाटी क्वारेन्टाईन भरियो । छिमेकी भक्तपुरेहरु त्रासले डांडापाखा लागे । बाग्लुङे नानीमा देखिएको पहिलो केशले पुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्का नाममा पुरै उडानका यात्रीहरुको खोजी भयो र आईसोलेशन राखियो । यसपछि मेरो मगजको शब्दकोषमा क्वारेन्टाईन, आईसोलेशन र सोसल डिस्टेन्स शब्दहरुले राज गरे ।
घरभित्रको पातलो उपस्थिति बीच सोसल डिस्टेन्सले मनग्य दुरी बढाउन खोज्यो । लकडाउनका कारण थाती रहेका कक्षागत वार्षिक नतिजा प्रकाशन पुरा गर्नुथ्यो । धेरै शिक्षक साथीहरु आ-आफ्नै घरमा बन्द हुनुहुन्थ्यो । स्कुलको सहायक बाटोबाट भित्रिएर काम गर्नु पर्थ्यो । मूलगेटमा क्वारेन्टाईनका पुलिस थिए । निषेध थियो । मान्छेको नजर शंकालु बनेको थियो । पुलिसको नजरमा कैयौं चोटी अटेरी बनियो पनि । घरमा पनि उसै । मजबुरीको काममा लाग्दा मेरो भिडियो र फोटो अपलोड गर्ने मेरा आत्मिय शिष्यहरु र कथित उच्च तप्काका मित्रहरुसंगै हालसम्म बांच्न सकियो गर्व लाग्छ।
मेरो मगजमा मास्क, सेनिटाईजर शब्दहरु बोझिला बन्दै गए । सराब नपिउनेहरु समेतले दल्नु पर्यो छिनछिनमा । मुख देखाउन डराउनेलाई त मास्कले दिनु राहत दियो । दानी मनहरुलाई दान र सहयोग दिन र उद्वारका लागि उत्प्रेरित गर्यो । व्यक्तिगत, सार्वजनिक र सरकारी स्वामित्वका अनगिन्ति साधन हुँदा पनि राति २:०० बजेसम्म भाई रेशम थापाको समन्वयमा जंगल हेभेन रिसोर्ट (Jungle Haven Resort Thakurdwara, Bardiya) का मालिक कृष्ण भट्टराई र बिना भट्टराईको अनवरत उद्वारकार्यले सबै थकित यात्रीहरुको मन पगाल्यो। सलाम छ, वहाँहरुलाई जसले मृत्यु डरका बीच पनि पहिलो जोखिम मोल्नु भो ।
यसै बीच पाल्पा रामपुर नगरले ईण्डियाका विभिन्न ठाउँमा बसि काम गर्ने रामपुरबासीहरु बीच संजाल बनाई खाना बास र ओसारपसारको चांजो मिलाउने उदाहरणिय काम गर्यो । यसैगरि थप व्यक्ति, सरकार र दाताहरुलाई सहयोगको अवसर जुरायो । सबै भन्दा त एभेन्यूज टेलिभिजनको टिमले काठमाडौंमा चलाएको र तिव्र उद्वार कार्यक्रम मानवियतामा अब्बल देखियो ।
दाता, सरकार र संघसंस्थाहरु ओईरिदै थिए । दान, सहयोग र चन्दा वर्षिदै थिए । संघियताले दिएको गहन दायित्वमा स्थानिय सरकारहरु अब्बल बने। सायद संघियताले स्थानीय सरकारको कल्पना नगरेको भए सबथोक निरर्थक बन्थे होलान् । कोरोना प्याकेज, परियोजना र रकमान्तरका बाढीहरु उर्लिए । नजिकै पाईने वस्तुहरु टाढा मिल्ने भए । कतिपय पेशेवर कर्मचारि र पदाधिकारिहरु त आफ्ना र आफन्तका सुखदुखमा समेत उपस्थित नभै कोरोना अवसरमा लतपतिय ।
कोरोना अवसर र जीविकोपार्जनका नयाँ शीर्षक र कार्यक्रमहरु थालिदै थिए । एक्कासी जब मेरो मित्र गणेश ढकालको सेतो प्लाष्टिकले बेरिएको लासलाई हरियो टिपरबाट झारेर औराही खोलामा सेनाले सलामी दियो, तब बुझें यो कसैलाई भयावह अवस्था र कसैलाई अवसर पनि रहेछ। लेखक:- थापा जनज्योती उच्च मावि ठाकुरद्धारा–६ बकुवाका शिक्षक हुन् ।
मनकामनामा शनिबार मात्र चार हजारभन्दा बढीले दर्शन गरे ५१ मिनेट पहिले
सौराहा आएका पर्यटकलाई तस्वीर खिच्न ‘सेल्फी प्वाइन्ट’ २२ घण्टा पहिले
जिल्ला सहकारी संघ कास्कीको अध्यक्षमा सावित्रा कोइराला २ मिनेट पहिले
लगानीको अवसरः आजदेखि हाइड्रो कम्पनीको साढे १४ लाख कित्ता आईपीओ बिक्रीमा ८ मिनेट पहिले
भरतपुर अस्पतालमा अत्याधुनिक आकस्मिक कक्ष बनाइने ११ मिनेट पहिले
हिमाली क्षेत्रमा बाँझो जमिनमा लोठसल्ला रोपणको तयारी १९ मिनेट पहिले
ललितपुर चेम्बर अफ कमर्शको प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न, अध्यक्षमा शाक्य निर्वाचित २० मिनेट पहिले
पोल गाडेको दुई वर्षसम्म पनि उज्यालोमा बस्ने सपना अलपत्र ४५ मिनेट पहिले
मध्यपूर्वी तराईमा अचाक्ली बढेको चिसोले जनजीवन झन्झन् कष्टकर ५९ मिनेट पहिले
तपाई मुख स्वास्थ्यबारे कत्तिको सजक हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है ! १६ घण्टा पहिले
नागढुङ्गाबाट विभिन्न कम्पनीका २३ थान मोबाइल बरामद १४ घण्टा पहिले
थप २४० मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि १७ घण्टा पहिले
कोरोनाको खोपलाई भारतमा २०० देखि २९५ रूपैयाँसम्म पर्ने ५ दिन पहिले
बैंकमा काम गर्नेहरुको उपचारका लागि बैंकिङ अस्पताल बनाइने ५ दिन पहिले
पाकिस्तानका अघिकांश शहर पावर ट्रान्समिसन प्रणालीले अन्धकार ७ दिन पहिले
सङ्क्रमण कम भएसंँगै जनजीवन सामान्यतर्फ १ हप्ता पहिले
१३७ औं समूहको ट्राफिक नियन्त्रण तालिम समापन ३ हप्ता पहिले
ज्येष्ठ नागरिक आश्रमबाट एक वृद्धालाई निकालियो, कहाँ जाने ? २ हप्ता पहिले
जीवनस्तर कति उठायो ग्रामीण विकास कार्यक्रमले ? ३ हप्ता पहिले
रचनाले पुस्करलाई भनिन् तिमी मेरो धड्कन ३ हप्ता पहिले
मतदानबाट अस्पताल बनाउने ठाउँको टुङ्गो २ हप्ता पहिले
दिप्सन र एलिनाले ल्याए ज्वाइँ बडो गजब छ ! ३ हप्ता पहिले
मुटुसम्बन्धी निःशुल्क शिविर सम्पन्न १ वर्ष पहिले
नेकपा सचिवालय बैठक : संगठन विभागमा तीन जना थप १ वर्ष पहिले
काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान थप कडाई ४ महिना पहिले
आइएमई लाईफ र गरिमा विकास बैंकबीच बैंक अस्योरेन्स सम्झौता सम्पन्न २ वर्ष पहिले